Kongo (RDC): Antso an-dahatsary hanao fihetsiketsehana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 27 Jolay 2018 11:40 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Italiano, 繁體中文, 简体中文, বাংলা, Español, English
(Fanamarihana: Lahatsoratra nivoaka tamin'ny Novambra 2008.)
Nirehitra indray ny fifandirana ao amin'ny Repoblika Demokratikan'i Kongo : folotaona nihenjanana, ady mifanelanelana, ary ny herisetra izay namela ny marikany teo amin'ny vahoaka, izay voatery indray handositra ireo ady. Tombanana eo amin'ny 5 tapitrisa eo ny isan'ireo olona maty nandritra ireo fifandirana isankarazany ireo, raha tsy isaina ireo vehivavy maro voaolana sy ireo ankizy nirotsaka ho ankizy-miaramila. Miantso ireo mponina ao Kongo RDC ho amin'ny fihetsehana sy hampijanonana ny krizin'ny maha-olona mitombo ao ireo lahatsary manaraka.
Vao haingana, natokana ho an'ity krizy ity ny lahatsoratra isankarazany tao amin'ny Global Voices : Fifanjevona ao Goma, Vaovao farany ao Goma, izay manadihady ireo herisetra, ady eo amin'ny tafiky ny ONU, ny tafika kongoley sy ireo mpikomy ao aminy, ny fifindran-toeran'ny mponina.
Nanoratra lahatsoratra ho an'ny Huffington Post momba ny fifandirana ao Kongo RDC i Bukeni Waruzi, teraka tao Kongo, lehibenà tetikasa ho an'ny Afrika sy ny Afovoany-Atsinanana ho an'ny fikambanana Witness.org, ary nampiakatra an-tambajotra lahatsary fanehoankevitra mba hamintinana ny toedraharaha politika, ireo fototra ara-tantaran'ity ady ity ary mba hiantsoana ny tsirairay hifantoka amin'ity krizy ity, mba hanerena ireo manampahefana hiraharaha ireo olontsotra izay lasibatra voalohany amin'izany.
Halefa manomboka ny 20 Novambra 2008 manaraka ny fampielezankevitra anà Dokotera Tsy Voafetran-tSisintany mba hanetsehana ny hevitra momba ny toedraharaha mampihoron-koditra ao Kongo RDC. Hanangona ireo fijoroana vavolombelona momba ny ady any atsinanan'ny firenena ny tetikasa Condition: critique , atomboka amin'ny fanadihadiana iray, izay ho atolotra ny andro hanombohana ilay tetikasa. Tena mahatohina ilay sombiny fampahafantarana voalohany, miaraka amin'ny fijoroana vavolombelon'ny ankizy iray teraka ary notaizaina nandritra ny ady, izay mahita ny fisiany toy ny làlana maizina mitondra mankany amin'ny fahafatesana irery ihany.
Omena ao anatin'ny tafatafa mivantana momba ny fiantraikan'ity ady ity ao amin'ny blaogin'ny Virunga National Park, izay itantaran'ilay mpiambina ala, Benjamin, ao amin'ny andianà mpisafon'i Kalengera, ny fomba tsy maintsy niatrehany ny famonoana ny rainy sy ny olona roapolo tao amin'ny tanànany, novonoina tsirairay. Nialoka tany anaty ala izy ary avy eo nanapa-kevitra ny hiditra ao anatina tobim-pitsoaponenana avy eo ary hitantara ny tantarany. Mandefa antso mahaontsa amin'ny vondrom-piarahamonina iraisam-pirenena izy mba hanaovany tsindry amin'ny fanjakana mba hanatsaharana ny toe-javatra iainan'ny vahoaka ankehitriny.
Inona no azontsika atao? Sosokevitra vitsivitsy ahafahana mihetsika no atolotr'i Bukeni Waruzi :
* Manoratra ho an'ny Filoha Kabila : http://hub.witness.org/DRCinCrisis
* Raha blaogera ianao, ampiakaro ao amin'ny blaoginao ity lahatsary ity ( http://hub.witness.org/DRCinCrisis)
* Mangataka ny haino aman-jery eo an-toerana mba handrakotra ity zava-mitranga ity, amin'ny fanoratana ho an'ny lehiben'ny toniandahatsoratra na amin'ny fanoratanao lahatsoratra mihitsy sy amin'ny fandefasana izany.
Lahatsary maro hafa no mandrakotra ireo fomba maro fisehon'ilay krizin'ny maha-olona amin'izao fotoana izao ao Kongo ao amin'ny sehatra fametrahana lahatsarin'ny tranonkala Witness. Napetraky ny ny Tetikasa Ushahidi ny tranonkala azo ifampiresahana mba hahafahana manaraka sy manondro toerana misy ny zava-mitranga any amin'ireo faritra misy ady, amin'ny alalan'ny hafatra maika alefa avy any an-toerana amin'ny alalan'ny SMS na ny imailaka.